आमाको काजकिरियामा आफैं बसेकी सांसद उषाकला राई भन्छिन्, ‘समाजलाई प्रगतिशिल बनाउन सफल भएँ।’
कोशी अनलाइन बुधबार, १५ फागुन, २०७५ मा प्रकाशित
एक नम्बर प्रदेशको दुर्गम जिल्ला खोटाङकी उषाकला राई एक नम्बर प्रदशसभा सदस्य हुन् । विज्ञान, कानून, समाजशास्त्रदेखि संस्कृत विषयको समेत ज्ञाता उनी संस्कृत विश्वविद्यालयबाट ‘महिलाको वंश अधिकारसम्बन्धि अवधारणा र महाभारतकालिन परम्परा बीचको तुलनात्मक अध्यन’ बारे विद्यावारिधी गर्ने पहिलो महिला पनि हुन् ।
संविधानसभामा सांसद रहँदा महिला अधिकार ककसको नेतृत्व गरेकी उषाकलाले भर्खरै आमा लक्ष्मी राईको मृत्यू संस्कार आफैं कर्ता बनेर सम्पन्न गरिन् । परम्परासँग विद्रोह गरेर आमाको काजकिरियामा सम्पन्न गरेकी उनले आफ्नो मृत्यु संस्कारको अनुभव यसरी सुनाइन् :
यसैले आमाको किरियामा बसेकी हुँ
आफ्ना आमाबाबुको पिर्तकर्म (मृत्यु संस्कार) गर्न पाउनु सबै सन्तानको समान अधिकार हो । यसमा छोरा र छोरी भन्ने कुरै आउँदैन । बेद शास्त्रमा यस्तो कतै उल्लेख पनि छैन । फेरि म बुवाआमाको एक मात्र सन्तान हुँ । यसैले आमाको मृत्युकर्म गर्नु मेरो पूर्ण अधिकार थियो ।
वास्तवमा भन्नुपर्दा चैं परिवर्तन आफैबाट सम्भव हुँदोरहेछ । र, हामीले आँट पनि गर्नुपछ । र, सकारात्मक कुरामा सबैले साथ दिँदा रहेछन् । त्यसमा आफूले अलिकति आँट गर्नुपर्दोरहेछ ।
बैदिक कार्य गर्नु सन्तानको कर्तब्य, निष्ठा, धर्मको कुरा हो । बेदमा छोराले होस् या छोरीले होस् काज किरिया गर्न मिल्छ भनको छ । यसैले मेरी आमाको निधन भएपछि केश मुण्डन गरेर मेरो आत्मसन्तुष्टिका लागि, मेरी आमाको सम्मानका लागि आमाको चीर शान्तिका लागि मैले काज किरियामा बसेकी हुँ ।
मलाई अचम्म लाग्छ, अझै मानिसहरू छोरीले काजकिरिया गर्न हुँदैन भनिरहेका छन् । यत्रो मुलुकमा परिवर्तन भइसक्यो । हामीले संघीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र प्राप्त गरिसक्यौं । जनताका लामो संघर्ष, त्याग, तपस्या, बलिदानका बाबजुद पनि यत्रो राजनीतिक रुपमा मुलुकमा परिवर्तन भयो । तर, यति सानो कुरामा हामी अड्किरहेका छौं । यी साना कुरामा नै हामी अड्किरेहका छौं । पहिलो शर्त भनेको विभेद र अन्याय अत्याचार अन्त्य गर्ने कुरा हो । यस्ता संकुचित रुढिबादी कुराहरू हामीले उखेर फाल्नुपर्छ ।
अर्को मैले समाजमा छोरीमाथि हुँदै आएको समाजिक सांस्कृतिक विभेदहरु सबै बुझेको भोगेको छु । जनजाति समुदाय पनि छोरी प्रति अझै पूर्ण उदार छैनन् । पित्तृसत्ताको प्रभाव चर्को दवाव कायमै छ । यसैले ती सबै विकृतीलाई चुनौती दिन म आमाको काजकिरिमा बसेकी हुँ । म जे पढियो, बुझियो त्यो जीवनमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु ।
बाधा आए तर कसैसँग डगिन
प्रत्यक्ष बाधा नआएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै बाधा आए । तर, म कसैसँग डगिन । जब मैले आमाको काजकिरिया आफैं गर्ने निर्णय गरे तब केही आफन्तहरूमा हलचल भएछ । उनीहरूले घुमाउरो पाराले किरियामा बस्न हुँदैन भन्ने सन्देश गरे । तर, मैले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरिँन । मलाई कपाल नखौरन पनि भनियो । तर, मैले पुुरुषले सधैँ कपाल काट्न खौरन हुने तर महिलाले आफ्नो वंशको अधिकारका लागि किन नहुने भन्दै अडान लिएर मुण्डन गरेरै बसेँ ।
एकदमै सकारात्मक । पहिलो कुरा त मेरो कामबाट मेरा बुबा धेरै खुशी हुनुभयो । त्यसपछि मेरा काका मेरो समाज धेरै नै खुशी भएको पाएँ । वास्तवमा भन्नुपर्दा चैं परिवर्तन आफैबाट सम्भव हुँदोरहेछ । र, हामीले आँट पनि गर्नुपछ । र, सकारात्मक कुरामा सबैले साथ दिँदा रहेछन् । त्यसमा आफूले अलिकति आँट गर्नुपर्दोरहेछ ।
हामी र हाम्रो समाजमा धेरैमा कु–संस्कारहरु छन् । त्यो कु–संस्कारहरुमा तुरुन्तै नराम्रा कुराहरुलाई छाड्ने र राम्रा कुराहरुलाई हामीले अवलम्बन गर्ने कुरामा हामीले अगाडि बढ्नु पर्छ । मैले मेरी आमाको देहान्त हुँदा मैले केश मुण्डन गरेर, सेतो बस्त्र धारण गरेर, १३ औं दिन बारेकी छु र म हाल ४५ औं दिन बार्नेक्रममा छु । र, सबैतर्फबाट मलाई सकारात्मक सहयोग प्राप्त गरेकी छु । मलाई सबैले साथ दिनुभयो । यसमा मिडियाको पनि उल्लेखनीय साथ रह्यो ।
मृत्यू संस्कार नगर्दा कम्युनिष्ट होइँदैन भन्ने गलत हो
आमा बुवाको वा आफन्तको मृत्यू सस्कारमा सहभागी हुँदा कम्युनिष्ट होइँदैन भन्ने सोच गलत हो । असल कम्युनिष्ट हुन त असल चरित्रको पो हुनुपर्छ त । भ्रष्टचारी व्यभिचारी पो हुनुहुँदैन त । शोषण दमन पो गर्नुहुँदैन त । आफना पितृलाई सम्मान प्रकट गर्दा के को कम्युनिष्ट विचार बिरोधी ? मैले आफूले बुझेको कुरा चैं के हो भने मेरो आमाको काज किरिया कसरी गर्ने भन्ने कुरा मेरो आफ्नो निर्णय हो र मेरो आफ्नो चिन्तनको कुरा हो । मलाई यस्तै लाग्यो । यो मेरो अधिकारको कुरा हो ।
आमा बुवाको वा आफन्तको मृत्यू सस्कारमा सहभागी हुँदा कम्युनिष्ट होइँदैन भन्ने सोच गलत हो । असल कम्युनिष्ट हुन त असल चरित्रको पो हुनुपर्छ त । भ्रष्टचारी व्यभिचारी पो हुनुहुँदैन त । शोषण दमन पो गर्नुहुँदैन त । आफना पितृलाई सम्मान प्रकट गर्दा के को कम्युनिष्ट विचार बिरोधी ?
कसैले आफ्नो आमाबाबुको किरिया एकैदिनमा सक्छन् भने मलाई यसमा टीकाटिप्पणी गर्नु छैन । उहाँहरुको खुशीको कुराको हो । मलाई मेरो आमाको किरया गर्न यसरी नै मन लाग्यो र गरेँ । यो मेरो आमाको शान्तिको लागि, आमाको स्वर्गबासको लागि र मेरो आत्माको सम्मानका लागि मैले यसो गरेकी हुँ ।
जहाँसम्म परम्परागत तरिकाले किन मृत्यु संस्कार गरेको यसलाई वैज्ञानिक तरिकाले गरेको भए हुँदैनथ्यो भन्ने तर्क पनि छ । तर, मलाई लाग्छ मृत्यु संस्कार आफैं विज्ञान हो । बैदिक काज किरिया कर्मलाई वैज्ञानिक विधि अपनाउन सकिन्न र भन्ने जुन कुरा छ त्यो गलत त होइन तर मान्छेको आत्मा र मान्छेको जीवन नै विज्ञान हो । त्यसकारण विज्ञान सँगसँगै मान्छेको भावनको कुरा पनि छ ।
मान्छेभित्र समवेदना, संवेग, माया, प्रेम, सद्भाव लगातयत हुन्छ । यो विज्ञानसँग नै सम्बन्धित विषय हो । यसैले आमाबाबुको काजकिरिया आफ्नो जाति धर्म, परम्पराअनुसार गर्नु गलत होइन । मैले बुझेको हाम्रो बेदग्रन्थहरू गलत हैनन्, वेद शास्त्रलाई गलत व्याख्या गरेर जाली नीति नियम बनाउने मनुस्मृति जस्तो मुनीहरू गलत हुन । उनीहरु दलाल थिए । यसैले महिला र दलितहरूलाई अछुत बनाए ।
ति गद्धारहरुकै कारण शास्त्रमा बिसंगती भित्रिएको हो । यसैले बैदिक कर्मगर्दा कम्युनिष्ट होइँदैन भन्ने भन्दा पनि धार्मिक समाजिक विभेदहरु हटाउन लागिपर्नुपर्छ । अझै कायमै रहेको छाउपडी र छुवाछुत निर्मूल पार्न सबै लागिपर्नुपर्छ ।
किरिया पुत्री बसेर समाजलाई प्रगतिशिल बनाउन सफल भएँ
मैले संस्कृतमा विद्यावारिधी गर्ने कारण पनि धर्मशास्त्रभित्रका छिद्रहरूलाई बुझेर विश्लेषण गरि महिलाको अधिकार स्थापित गराउनु हो । यसैले मैले त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन गराउन खोेजेको हुँ । जहाँसम्म मलाई लाग्छ मैले किरियामा बसेर समाजमा नजिर बसाएको छु । किराँती संस्कारभित्रका विकृतीहरुलाई हटाउन सफल भएको छ ।
मैले मृत्यु संस्कारमा गरिने रक्सी मासुको भोज पूरै बर्जित गराउन सफल भएँ । फलैंचा बनाएर त्यहाँ राँगाको रगत चढाउने परम्परालाई तोडेर आमाको नाममा दश लाखको अक्षय कोष स्थापना गराएँ । मलाई लागेको छ, मैले गरेको संघर्षले मेरो समुदायभित्र मात्र नभएर बाहिरका महिलाहरूको पनि आत्मबल बढाएको छ । अबदेखि छोरीहरू पनि सहज रुपमा आमाबाबुको संस्कार गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।
पण्डित र बिजुवाहरूले चलाएका खराव चलनहरू हटाउन सकिन्छ भन्ने पनि प्रमाणित भएको छ । हामीले कुनै राँगा सुँगुर काटेनौं, रक्सी चढाएर भोजभतेर गरेनौं, पित्तृकालागि राँगा कुखुराको रगत चढाएनौं । पटक–पटक मिटिंग बसैर खराब चलनलाई त्याग्न लगायौं । मलाई मेरो श्रीमान् शेरबहादुर तामाङ र बुबाले पनि खुब साथ दिनुभयो । हामी अन्र्तजातिय विवाह गरेका श्रीमान्–श्रीमतीलाई कुलले समान दर्जा दिन बाध्य भयो । यसैले मेरो प्रयास सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि ‘ब्रेक थू्र’ जस्तै भयो ।
महिलाहरूमा वंशको अधिकार स्थापित गराउन सघायो
जहाँसम्म किराती चेली भएर किन हिन्दूविधि जस्तै मृत्युसंस्कार गरेको भन्ने कुरा छ यसमा म प्रष्ट छु, मैले धर्म सस्कारमा चोट पुर्याएको छैन । मैले संस्कृतमा पिएचडी गर्न थालेपछि पनि धेरैले किराँतीकी छोरी भएर किराँत धर्मग्रन्थ, संस्कृति र सभ्यता छाडेर किन संस्कृतमा पिचएडी गर्नु पर्यो भनेर भनेका थिए । र, म कपाल खौरेर सेतो बस्त्र धारण गरेर किरियामा बस्दा कसैले त उषाकलाले प्रचारका लागि यो सबै प्रोपोगण्डा गर्दैछे पनि भने अरे ।
पहिले कुनै पनि धर्ममा लैगिक र जातिय विभेद थिएन । पछि मात्र प्रवेश पाएको हो । बैदिक कालमा आमाको नामबाट वंश चलेको थियो । महाभारतकालमा कुन्तिपुत्र भनिनुले पनि त्यो प्रमाणित हुन्छ । त्यो बेला जुन घरमा स्त्रीको बास हुन्छ त्यो घरमा ईश्वरको वास हुन्छ भन्ने मान्यता थियो । र, हाम्रो किराँत धर्ममा पनि यसको कुप्रभाव छिर्न सफल भयो । म त्यसलाई हटाउनका लागि पहिला गहन अध्यन गर्न चाहन्थेँ ।
मेरो पिएचडीको सोधको उद्देश्य महिलाहरूको गुमेको वंशको अधिकारलाई फर्काउन सहयोग पुर्याओस् भन्ने हो । र, मैले आमाको किरया बसेर त्यही उद्देश्यलाई पूरा गराउने प्रयास मात्र गरेकी हुँ । र, जहाँसम्म लाग्छ म आफनो समाजमा महिलाको बंशको अधिकार स्थापित गराउन सफल भएको छु । अबदेखि सबैले यसको अनुशरण गरुन् । किनभने समाजमा सबैखाले बिभेद अन्त्य गराउन सकारात्मक विभेदमा आधारित भएर लागिपर्नुपर्छ ।
आपसी अस्तित्व सबैले स्वीकार्नुपर्छ । धर्ममा भएका बिकृती अन्त्य गराउनुपर्छ । महिला र पुरुषको सहभागिता समान गराउन व्यवहारिकरुपले नै प्रमाणित गराएर लागिपर्नुपर्छ । स्थापित नजिरहरूलाई अनुशरण गर्न लगाउनुर्छ । अनि मात्र समाजमा सकारात्मक बिभेद स्थापित हुन्छ ।